Chinhu chinokosha kana kudzvinya chinangwa tafura kuona slump girafu ari nepachinko yokumusoro
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Chinhu chinokosha kana kudzvinya chinangwa tafura kuona slump girafu ari nepachinko yokumusoro
Recent nepachinko yokumusoro, sikirini hombe ne muchina anonzi mashoko Lobo, zvitoro kuti iiswe ave mazhinji. The chitoro nechemberi hwomukova uye pakaunda pamberi, nezvimwewo, iri muchina uyu kwave yakaiswa, richangobva uchitamba mutambo tafura imwe chete data, uye magetsi jackpot mukana, anosvika varove uye payout Kuchinja girafu rinonzi slump girafu unogona kuona chinozunguzirwa, akadai uwandu nokumukirana.
Uyewo, hapana mashoko Robo nepachinko parlors, anouya ane mashoko pakaunda pamusoro mumwe patafura.
richava tidzivise hwakadaro basa, asi inozikanwa ndiko shoma mashoko achienzaniswa kusvika date Robo. Zviri kudaro zvakawanda zviri date Robo kuonekwa, asi mashoko uchida zvikuru kuzivikanwa muna ndiye mumwe kufa uye payout iitike girafu.
The payout Kuchinja girafu, uye mamiriro ezvinhu zuva rimwe sunrise bhora uye muropa patafura mutsetse girafu, ndizvo zvakanga nyore kuona. Payout kana panguva mukuru raparadza, mamiriro ezvinhu uye chinoramba Chan, unogona kutarisa nekutambira muropa dhigirii.
sezvo kumusoro uye nechepasi sangano yakamanikana papuratifomu iyi mutsetse girafu, bhora kunze kuitika akatsiga, zvichava nyore kuti chinangwa kumira muropa.
※ Chokwadi, pane kare Chokwadi Zvinogonekawo kuti chete yakasimba nguva Horukon apo mower akanga agere chemwenje kuti zvino kugadzikana.
kumusoro uye pasi rwavamanikidzi anomira kufamba girafu ichi, zvikuru musiyano muropa uye paavhareji, kunyange zuva pamberi simba, kana vasingazivi mafungu kuonekwa pakarepo akagumbuka, ndiro tafura ine ngozi muropa. Zvisinei, izvozvo, sezvo panewo putika simba, asi ndiyo kunyanyisa, tinogonawo kuva chokwadi kuti chikuva kuti inogona kutarisirwa kuridza mamwe mashoko.
Zvino, ndinoda kuti ndione mumwe tsime ndiye papuratifomu mukana.
ari nepachinko muchina ndiko, asi pane guru raparadza mukana, kuti unomirira yoga ikozvino ndingangokuvara magetsi jackpot nacho, chichaitika mukana. Vhura (zvidzidzo pa jackpot mukana) nguva zhinji, achava mutungamiriri chii yasvika imwe jackpot. Kazhinji, Tai ichi 確 Kana mwero iri 180 zvichidzika, zvichava chinangwa meso papuratifomu.
kuva anopfuura 180, rakawedzera mari anosvika rova, zvinova kana kusimba Chiyero uyewo kuzovazve anogona kuva akabuda. Zvisinei, kuwana kuchikuva akadaro 180 zvichidzika, chokwadi munhu zvikuru kwazvo.
Mukuwedzera, muna mashoko robo, unogona kuona nepachinko achengetere yose mashoko. Kana isu dzakarukwa zvakanaka kusimbiswa, kana ane mutsetse zvikuru munyoro anomira wekona tafura nechigadziko fungidziro uye slump girafu, izvozvo pachitsuwa pedyo nesuo, vakawanda vakadaro, vanogona kuva akakunda tsika dzebhizimisi iwe.
Chokutanga, vanosarudza muenzaniso uchida yakarohwa payout pedyo yakarurama mutsetse mira chete Kuchinja girafu anogona kuva kana, sarudza tafura kazhinji kuramba kumusoro kupfuura avhareji mutsetse, akavapindurawo, zviri simba vamire slump girafu kubva, ungada kunowirirana kusarudza yakaderera tafura chete anogona kumira mukana.
anoiswa pamusoro mutambo puranga, panyaya chete Data kukurira hapana nepachinko chitoro, urege mumwe trapezoidal mukana. In
ikozvino, nekuti kunewo date pakaunda kuti zvichaita kuratidza uwandu nokumukirana, dzemaitirwe nzira wakatangwa ambotaurwa, ndapota itai masvomhu pachako. Than tinongoita urove zvakare, munhu akarova kuongorora mukana, chinhu apo unogona kukunda zvakatowanda. , Sarudza tafura kazhinji kuramba kumusoro kupfuura avhareji mutsetse, nguva ino, iwe kubva slump girafu simba kumira, zvingava mutambo kusarudza kamari tafura chete angamira mukana.
ikozvino, nekuti kunewo date pakaunda kuti zvichaita kuratidza uwandu nokumukirana, dzemaitirwe nzira wakatangwa ambotaurwa, ndapota itai masvomhu pachako. Than tinongoita urove zvakare, munhu akarova kuongorora mukana, chinhu apo unogona kukunda zvakatowanda.